Banyere Anyị - Ningbo Wegro Children Products Co., Ltd
Nwa ala oche Gr0 + (0-13kg)
Inwe ọṅụ Basic
Inwe ọṅụ Plus
Baby ala oche Gr1 + 2 (9-25kg)
ndi agha Plus
ndi agha Basic
Ndi agha Omni-protek
Baby ala oche Gr1 + 2 + 3 (9-36kg)
Child Booster oche Gr2 + 3 (15-36kg)
Baby ala oche Gr0 + 1 + 2 + 3 (0-36kg)
Baby echebe fom
N'olu support fom
Seat azụ n'echebe
WE02 agha & Makụọ
A ìgwè nke dị ka kpọrọ ndị mmadụ nke ọma mụtakwa na imewe na engineering of nwa ala oche nke bịara wegara na otu ọhụụ na-na na-adịghị ize ndụ na ụgbọ ala njem.
Mgbe ọ bụla a echiche ọhụrụ pụta, tupu aghọta ya, anyị ga-eme a otutu nchoputa, nnyocha, na ibuo okuku ule iji gosi na echiche bụ a mma otu. Mgbe ahụ otu ga ikpoputa imewe ngwọta na-aghọta echiche n'ime ngwaahịa n'okpuru ndị kasị elu nchekwa ụkpụrụ.
Mgbe a ngwaahịa na-mma ma pụtara na-mma, na mmepụta na ọkọnọ yinye bụ isi ihe na-a nchekwa oche. Na Wegro, anyị kpewe tiri soplaya & quality management iji jide n'aka na onye ọ bụla oche anyị na-emepụta esịmde mbụ imewe chọrọ.
Wegro-agba mbọ ka a na-pụrụ ịtụkwasị obi, ọrụ na-akwanyere ùgwù na nwa nchekwa ụgbọ ala oche soplaya!
Ihe anyị na-akpọrọ
People - Anyị na-asị "otu òtù" ọ bụghị "ọrụ". Anyị kpọrọ na-akwado anyị otu òtù dị ka a asọmpi uru. Anyị na-agbalịsi ike iji na-adọta, ịzụlite, ejigide ma na-akwali ndị kasị nwee nkà ndị anyị nwere ike ịhụ, ndị na-elekọta ndị na-arụ ọrụ ọnụ dị ka mmekọ.